I-6 Best Banks Offshore yokuvula ama-akhawunti - Izincomo namacebiso
I-6 Amazwe Ahle Ukuvula I-Akhawunti Yasebhange lase-Offshore
Abantu bazohlinzeka ngezeluleko eziningi ezahlukene uma kuziwa ku ama-akhawunti asebhange angaphandle kakhulu. Lokhu akusho ngoba amanye awo ayiphutha - kunezinketho eziningi nje lapho. Izwe eliphelele lasebhange lomuntu oyedwa noma inkampani kungenzeka ukuthi lingabi nelona elifanele lomunye.
Kodwa-ke, kunezinye amazwe abatshala izimali abasemaphandleni abaqhubeka bekhuluma ngazo. Kulesi sihloko, sizohlola okungcono kakhulu amabhange ase-offshore amazwe - nokuthi yikuphi okusemandleni abo.
Izwe Elihle Kunazo Zonke Izinzuzo Zentela - Iziqhingi zaseCayman
Iziqhingi zaseCayman zinedumela eliqinile lamazwe omhlaba, ezinikezela ngezinsizakalo ezigcwele zamisebenzi yezimali kumakhasimende ahlukahlukene. Iziqhingi nazo ziyindawo yentela. Leli yigama elichazwa yi-Investopedia njengezwe elinikeza abantu bangaphandle namabhizinisi isikweletu esincane sentela. Ngaphezu kwalokho, inendawo yezepolitiki neyozinzile kwezomnotho, okuyimfuneko kubantu abaningi.
Ukungabi naso intela ngqo kwenza iCayman Islands ibe umthombo okhulayo webhange lase-offshore, kusho uCayman.com. Azikho izintela ezizuzisayo, izinkampani, ukugodla, impahla, ukukhokha noma inzuzo. Ngaphezu kwalokho, akukho ukulawulwa kokushintshaniswa, okuvumela isikhwama samahhala singeniswe futhi siphume eziqhingini kunoma yimiphi imali. Azikho izidingo zefa lokugcina impahla.
Kunezindawo eziningi zentela emhlabeni. Ngakho-ke, amaCaymans enze okuningi ukuthola idumela lawo eliphakeme njengendawo efanele yokuya ebhange olwandle. Babonwa njengesinye sezikhungo eziphambili zezezimali ze-10 zomhlaba. Ngaphezu kwalokho, umthetho wasebhange waseCayman Islands uhlanganisa imigatshana eyimfihlo yamakhasimende abo. Iziqhingi zenze uhlaka oluqinile lokulawula izinsizakalo zabo zasebhange lolwandle. Futhi, bayancintisana ezimakethe zemali ye-Euro.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi, nakuba amaCaymans anikeza izinzuzo ezinkulu zentela; amazwe amaningi, njenge-US nase-UK, intela izakhamuzi nezakhamuzi zawo ngenzuzo yomhlaba wonke.
Izwe Elihle Kunabacebile - eSingapore
Ingabe unayo i-$ 200,000 noma ngaphezulu ofuna ukukubeka ku-akhawunti eseceleni? ISingapore ingaba yisinqumo sakho esihle kunazo zonke. Inqubo ye-akhawunti imvama kulula. Ezimweni eziningi, ungaqala ukusetha i-akhawunti ngaphandle kokuya eSingapore, kusho uSing Sav.
Enye yezizathu ezenziwa abantu bakhethe i-Singapore kungenxa yedumela laso njengendawo ezinzile, ephephile yokugcina amafa. Izwe linemithetho eqinile emkhakheni wabo wamabhange. Lokhu kusho ukuthi umcebo wakho uvikelekile kahle. Amabhange abo nawo anobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu. Lokhu kuvumela ukuphepha kanye nokufinyeleleka kalula kwezimpahla zakho.
I-Singapore inikezela ngezinsizakalo ezahlukahlukene zokulawulwa kwengcebo, imali, izindlu zabathengisi, nama-akhawunti ukuphatha imali yakho. Kukhona futhi nohla lwamapulatifomu okuhweba ukuze usebenzise ngokunenzuzo ezimakethe eSingapore. Futhi, ikunikeza izindlela eziya e-US, Hong Kong, China, Europe, nokuningi. Ama-akhawunti atholakala ezinhlobonhlobo zezimali, anciphisa ukuhlukunyezwa kwamanani wokushintshana okuphezulu. Amabhange aseSingapore anamaqembu alawula ubuciko abanamakhono. Labaqeqeshiwe banikezelwe ukukusiza ekutholeni isu elingcono kakhulu lwezezimali ngemali yakho.
Izwe Elihle Kokuvikelwa Kwempahla - Switzerland
ISwitzerland sekuyisikhathi eside idumela lokuba njengelinye lamabhange asemaphandleni angaphandle ukufihla imali. Esinye sezizathu eziyinhloko salokhu imithetho yokugcina yobumfihlo yezwe. Babuyela emuva eminyakeni engu-300, ukuthi i-Stuff Works ichaza kanjani. Umthetho waseSwitzerland uvimbela amabhange ukuba angavezi noma yiluphi ulwazi mayelana ne-akhawunti yakho ngaphandle kwemvume yakho. Abaningi abaphula umthetho bangabhekana nezinyanga eziyisithupha ejele. Ngaphezu kwalokho, iziphathimandla zingazikhokhela ku-50,000 ama-francs aseSwitzerland. Okuwukuphela kwalokhu komthetho wobumfihlo kuleso simo sezenzo zobugebengu. Kukhona nokubika ngonyaka ngonyaka weziphathimandla zentela ukugwema ukukhishwa kwentela.
Uhlelo oluhle lokuvikelwa kwempahla luhlukanisa izimpahla zakho ezivela ezweni lakini; kanye nezinkantolo zalo. Ukuze wenze kanjalo, kubalulekile ukubamba i-akhawunti yakho ku-LLC ye-offshore noma ukwethenjwa. Imithetho yobumfihlo eSwitzerland kanye nemithetho yokuvikelwa kwempahla yeCook Islands noma iNevis yenza lokho kwenzeke.
Esinye isizathu esithandwa yiSwitzerland njengebhange lokuvikelwa kwempahla ukuphepha kwalo njengendlela yokutshala imali engaphansi. Izimo zezombusazwe nezomnotho eSwitzerland zizinzile. I-Swiss Bankers Association (SBA) ilawula amabhange. ISwitzerland ayikhokhisi intela ngezinzuzo, izabelo noma ifa, uma inkampani yaseSwitzerland ingayitholi leyo nzuzo. Umthetho waseSwitzerland udinga ukukhishwa kwemali ephakeme kakhulu. Njengakwa-2004, i-SBA ibuyekeze isivumelwano se-Depositor's Protection. Lesi sivumelwano siqinisekisa ukuthi uma kwenzeka ukuhluleka kwebhange, abafakiwe imali bayothola izimangalo zabo ezinemthethweni.
Izwe Elihle Kunazo Zonke Izinkampani - Nevis
Uma ubheke ukuhambisa inkampani yakho ngasolwandle, i-Nevis ingenye yezinqumo ezinhle kakhulu. Yilapho sakha khona mayelana ne-70% yezinkampani zasolwandle esiyihlanganisa. Yiziphi iziqhingi abantu abaningi eziqhingini ukuhlinzekwa kwempahla yabo, izindleko eziphansi namazinga aphezulu. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ku-Nevis LLC, ngenxa yezimiso zayo ezinamandla zokuvikelwa kwempahla. Izinkampani ze-Nevis zinezakhiwo eziguquguqukayo zokusebenza kanye nokusingatha ngezidingo ezimbalwa zomthetho. Azikho izintela ezengeziwe noma iziqondiso kanye neKomishoni Yemisebenzi yezezezimali igcina izindinganiso eziphakeme.
Izinkampani ze-Nevis zinenzuzo enhle kubanikazi benkampani kanye nabanamasheya / amalungu e-LLC ngokufanayo. Izinkampani zingahambela noma zivela kwezinye iziphathimandla, futhi zihlanganise noma zihlangane nezinye ze-Nevis noma izinkampani zangaphandle. Akukho mthetho ofuna izinkampani ze-Nevis ukuthi zibe ne-share capital. Ngaphezu kwalokho, izabelo zingabika ngabaqondisi benkampani. Abanikazi bamasheya banamalungiselelo okuzivikela futhi bangakwazi ukuphuma enkampanini ngenani elifanele. Futhi, izinkampani ze-Nevis zingabhalela amasheya abo ekuthenganeni kwempahla emhlabeni jikelele. Lokhu kuhlanganisa i-NASDAQ, iLondon Stock Exchange, i-International Securities Exchange, nokuningi.
I-BVI yiyena owawunqobile kulolu chungechunge. Kodwa ngomthethonqubo onzima kakhulu, amandla-ukuthi-ayenze ngokuphumelelayo isibonakaliso esikhulu esithi "Hamba" sokuphatha. Sethemba ukuthi ekugcineni bazovuka bese beqaphela ukuthi kunezinye izinqumo emhlabeni jikelele. Mhlawumbe ukuphathwa kuzothatha isikhundla sabaphathi bamanje nalabo abanenkinga yebhizinisi le-savvy. Bese-ke, mhlawumbe bangakwazi ukubuyela emuva.
Izwe Elihle Kunazo Zonke Izintela Zenzalo Ephakeme - Belize
Uma ucinga amazinga ezithakazelo ze-akhawunti yebhange lase-offshore, cishe iBelize ngeke ibe kulolu hlu. Esikhundleni salokho, usesho lwakho lungabonisa amazwe afana ne-Ukraine, ahambisana nesilinganiso se-interest esingu-20%. Uzwakala okuhle, akunjalo? Iyakwenza, uze ucabange izinto ezifana nokukhuphuka kwemali nokuphepha kwebhange. Ukunyuka kwemali e-Ukraine yi-49%. Lona umehluko we-29% onika isamba senzalo sangempela esincane kakhulu, ngamanani e-Go Banking Rates. I-Ukraine inenkinga emibili enkulu: yindawo yokukhwabanisa imali kanye nezimali ze-Ukraine sezincipha. Lokhu kusho ukuthi imali yakho ayilondekile kakhulu, futhi ungase ungaboni ukuthi i-20% enhle ebuya ekutshalweni.
Manje kungani iBelize? Ngokubhala lokhu, iBelize inesilinganiso senzalo sangempela se-2.54%. Inesilinganiso sokukhuphuka kwesilinganiso sokusondela kwe-0%, kusukela maphakathi ne-2019 ngakunye kwezohwebo Ukuhweba. Lokho kuphakeme kancane kunakwamanye amazwe okukhulunywe ngawo kule ndatshana, ngaphezu kwe-US neCanada. Noma lokho kungekho i-20%, iBelize futhi iyizwe elizinzileyo enezinye izinzuzo eziningi. U-Lan Sluder uchaza ukuthi ama-akhawunti aphesheya kweBelizean awekho ngaphansi kwentela yendawo noma imikhawulo yokulawula ukushintshana. Abaphethe ama-akhawunti bangazikhetha kwezimali ezinkulu kakhulu, futhi isilinganiso sokushintshana phakathi kweBelize ne-US yi-2: 1. Izwe laziwa futhi ngokuxhasa ubumfihlo bamakhasimende abo. Ngaphezu kwalokho, amabhange aphesheya kweBelizean abhekelela kuphela kumakhasimende abo aphesheya - akukho makhasimende endawo avumelekile.
Izwe Elihle Kokuphepha - eJalimane
Uhlu lwamuva nje lweGlobal Finance olusemabhange aphephe kakhulu, elinye lamabhange aseJalimane lithatha indawo. IGermany ibambe ezinye ezintathu ezilandelwayo endaweni eyishumi ephezulu, eyisithupha enanini lama-50. Izinkokhelo, inkampani yaseJalimane, ixoxa ngesizathu esikhulu sokuthi iJalimane ingumthombo wamabhange aphesheya aphephe kakhulu. Zithi kungukuqina kwezwe; ikakhulukazi kwezomnotho. Kungumthombo othandwayo wokonga, wokuhlola, kanye nama-akhawunti wokugcina.
Njengoba i-Jalimane lizwe lanamuhla nelithuthukile, abanikazi be-akhawunti bazokwazi ukufinyelela kumasevisi we-inthanethi nakuma-ATM, i-24 / 7. Ezimweni eziningi, awudingi ukuba khona ukuze uvule i-akhawunti eJalimane. Ukwengeza, izindleko zokuvula nezokugcinwa ngokuvamile ziphansi. Amanye amabhange anika futhi ithuba lokuthola i-Visa noma i-MasterCard ikhadi lesikweletu kanye. Izinzuzo zikhulu nakakhulu uma uthanda ukuhamba. Okusho ukuthi, njengoba ne-akhawunti e-Euro ingaba usizo kulo lonke elaseYurophu. Ngaphezu kwalokho, amanye amabhange anemiphumela engeziwe yokuhamba abahamba njalo.
Akuyona indawo enhle uma unecala eliza emva kwakho, noma kunjalo. IGermany iyaphoqelela ukwahlulela kwamanye amazwe. Ngakho-ke, uma ukuvikela impahla kungumgomo wakho, iya kwenye indawo.
I-Best Offshore Bank Iseluleko sokuvula i-Akhawunti
Ukuvula i-akhawunti kunoma yiliphi lawa mazwe kuzohluka ngobunzima nezindleko zezwe nangebhange. Ingabe usukulungele ukuthatha isinyathelo esilandelayo bese uvula i-akhawunti yakho yasebhange engaphesheya noma uthole imininingwane engaphezulu? Zizwe ukhululekile ukukhuluma nochwepheshe bethu bezezimali. Bangaqinisekisa ukuthi uthola okuningi ku-akhawunti yakho. Futhi, abasebenzi bethu bangasebenza ne-accountant yakho ukuthi uqiniseke ukuthi ulandela imithetho yentela efanele.
I-Investopedia inikeza izinto ezingeziwe okufanele zikhunjulwe lapho kuvulwa i-akhawunti engaphesheya. Izidingo eziyisisekelo zizofana nokuvula i-akhawunti ezweni lakini. Uzocelwa imininingwane yomuntu siqu efana negama lakho, usuku, lokuzalwa, ikheli, ukuba yisakhamuzi nomsebenzi. Ngisho namazwe anemithetho yobumfihlo eqinile azokubuza lokhu. Lokhu kungenxa yokuthi kubalulekile lapho kusethwa i-akhawunti yakho ukuthi ibhange lingaqinisekisa ubunikazi bakho.
Amanye amadokhumenti ongawadinga ku-akhawunti yakho afaka izinto ezilandelayo. Bazocela ikhophi yelayisense lakho lokushayela kanye / noma ipasipoti nobufakazi bekheli. Ngaphezu kwalokho, izikhungo eziningi zizocela amadokhumenti wezezimali ebhange lakho lamanje. Bangase babuze ngohlobo lwezinto okulindelwe ukuthi zidlule kuma-akhawunti. Ngaphezu kwalokho, bazodinga ukuqinisekisa ubunikazi bakho. Le yimithethonqubo yokulahla imali engafanele. Amabhange afuna ukwenza isiqiniseko sokuthi othile usebenzisa izinsizakalo zawo ngokungemthetho.
Isiphetho - Ukuthola iBhange Elifanele
Njengoba ukwazi ukubona, abukho ubukhulu besayizi eyodwa-bonke. Kunokhetho oluningi uma kufikwa ekukhetheni izwe lapho kuvulwa i-akhawunti yasebhange ngaphesheya. Onke amazwe achazwe ngenhla anezinzuzo ezingaphezu kwalezo “ezinhle kakhulu.” Amanye akhokha amanani enzalo aphezulu kunamabhange asekhaya. Thola ukuthi yiliphi izwe elikufanele. Ukuze wenze njalo, ungafuna usizo lomunye wochwepheshe bethu bezimali abanolwazi. Uyacelwa ukuthi usebenzise ifomu lokubuza noma inombolo yocingo kuleli khasi. Ungaxhumana nathi usebenzisa enye yalezi zindlela. Ngemuva kwalokho ungaqala ukuqalisa ku-akhawunti yasebhange lolwandle ekuhle kakhulu.
Uma kukhulunywa ngokuphepha kwesithombe sakho sezezimali nokuhlelela ukuvikelwa kwakho, gcina lezi zeluleko engqondweni. Ngaphezu kwalokho, ufuna izikhungo zezimali eziphephe kakhulu neziphephe kakhulu emhlabeni. Kuncike ekuphatheni okukhethayo, le nhlangano inebudlelwane namabhange ase-offshore aphephile okwenza konke okusemandleni ukuzinza nokuphepha.
Amabhange ase-Offshore noma amabhizinisi aphesheya kwezilwandle abhekisele ezinhlanganweni eziningi zamabhange nezitshalomali. Zitholakala emazweni nakwimithetho engeyona eyezwe le-depositor. Ngobuchwepheshe umuntu angabheka noma yiliphi ibhange elingaphesheya lapho lihlangabezana nalezi zindlela ezingenhla. Ngaphezu kwalokho, ochwepheshe ngokuvamile bagcina isikhathi sezikhungo zamabhange ezitholakala lapho zibheka kakhulu ubumfihlo bokuthi bumbeka.
Kusukela imvelaphi yabo, i-Offshore Banks, bekulokhu kukhonjiswa ngokungafanele ngabezindaba nabaphathi bezindlu ngokufanayo. Lezi zinsolo zisuka ekuwequkweni kwentela kuya ekutshontsheni imali. Kepha hlola ngokucophelela inhloso yangempela yama-Akhawuntini asebhange ase-Offshore. Ngemuva kwalokho yenza ucwaningo olungakhokhelwa ukuze ubheke ukuthi imali engekho emthethweni ibanjelwe kuphi ngempela noma “ihlanza.” Lokhu kuzosikhanyisela kakhulu ngalesi simo. Ezinye izinsolo zamanga zigxile ekugxekeni kwezimo ezingaphephile, ukulawulwa okungahambi kahle, njll.
Nakulokhu futhi, laba bekungeke kube kude neqiniso. Iziphathimandla eziningi ze-Akhawunti yeBhange lase-Offshore yanoma iyiphi impumela inemithetho yasebhange esebenza ngokuqinile futhi eqinile. Lokhu kungenxa yokuthi kuyisifiso sabo esihle ukuheha nokugcina abagcinimafa. Iziphathimandla zigxila le mithetho ekufezeni izidingo zomdwebi. Iningi lale mithetho lincike enhlokodolobha yakwamanye amazwe ebanjelwe emabhange abo njengesici esiyinhloko somnotho. Futhi, la mabhange imvamisa angumthombo wawo oyinhloko wokutshala imali kwamanye amazwe.
Ukuchazwa okubanzi kwebhange lase-Offshore yibhange elisezandleni noma ezweni elihlukile emthethweni noma ezweni lapho kuhlala khona umtshali zimali noma umtshalizimali. Enye yezinzuzo eziningi zokubamba i-akhawunti yasebhange yase-Offshore ukuthi zivame ukutholakala ezindaweni zentela. Futhi, banemithetho ehlinzeka ngokuvikela okukhulu kwempahla nezinzuzo eziyimfihlo kumnikazi we-akhawunti yasebhange. Le mithetho futhi ivame ukuvumela ukuphumula kwemikhawulo maqondana nezinhlobo zama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle. Kunemithetho enikezela ngemingcele yobungozi kubadiphozi noma kubatshalizimali. Ngakho-ke, abalawuli babikezela ukuthi ibhange lisingatha kanjani futhi lisebenzise kanjani imali yokuphepha okuphezulu kwediphozi. Kodwa-ke, iningi labalawuli bafuna ukunika abagcinayo imali eningi yezinketho zasebhange nezokutshala imali. Lokhu kufana nomthetho oncishisiwe kubabeki.
Izindawo ezaziwa kakhulu phesheya kwezilwandle zivame ukunikeza ukwehla okukhulu kwesibopho sentela. Kanti, kwamanye amazwe, njenge-US ekhokhisa izakhamizi zayo emholweni womhlaba jikelele. Ngezinhloso zethu lapha sizogxila kulabo okufakazelwe kuphela ukuhlinzeka ngezinzuzo ezifanele njengoba kuchaziwe ngenhla. Lawa mabhange ase-Offshore angatholakala ezifundeni zangempela zeziqhingi ezifana namaCaymans noma amaChannel Islands. Ngenye indlela, angaba semazweni afihlwe umhlaba njengeSwitzerland. ISwitzerland kube yindawo yentela isikhathi esingaphezu kweminyaka eyikhulu - futhi yinde kunezizwe zesiqhingi.
Kube nokuxoxwa okuningi mayelana nobumfihlo bamabhange aseSwitzerland. Uzoqaphela, kodwa-ke, amabhange aseSwitzerland abake baba nezinkinga yilawo mabhange anamagatsha akhiwe ngaphandle kweSwitzerland. I-Credit Suisse ne-UBS inobukhona obukhulu be-US. Ngakho-ke, abalawuli baseMelika bangaba nezindlela zabo kulamabhange. Labo abanezindawo zaseSwitzerland eziqhubeka nokugcina ubumfihlo obuqinile.
Njengoba kushiwo esigabeni sethu sokuqala, kunenqwaba yemibono eyiphutha nezinganekwane ezihambisana nama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle. Ingabe Amabhange ase-Offshore Awayindawo Yabahlali Bezimali Nezelelesi? Funda isigaba sezinganekwane zasebhange kule webhusayithi ukuthola eminye imininingwane. Kulesi sihloko, sinemininingwane eyengeziwe ngezinganekwane ze-Akhawunti yeBhange lase-Offshore okufanele icatshangwe.
Uzoqala kuphi i-akhawunti yakho ye-offshore?
Kubalulekile ukuthi ukhethe amandla afanele lapho unquma ukuthi iliphi igunya ongalisebenzisa njengezikhundla zebhange elingaphesheya kwezilwandle. Iningi lezindawo eziphethwe phesheya zinemithetho enokuqonda, nemisindo. Zenzelwe ukuphepha imali nokugcina izimfihlo zazo. Kodwa-ke, abanye bakala izinzuzo zabo ngentela, kuyilapho abanye ekusithekeni, njalonjalo.
Yize bonke benikezela ngemvelo eyimfihlo futhi ephephile, kuyacabanga ukucacisa ukuthi iyini imigomo yasebhange. Lapho-ke ungakhetha amandla ngokufanele. Idlanzana leziphathamandla ezingasogwini lenza imisebenzi emibi yokuphatha nokulawula izinqubo zabo zebhange. Kepha umtshalizimali onolwazi noma umeluleki uzothatha lokhu njengongazifanele bona noma amaklayenti abo. Ngaphezu kwalokho, le mikhawulo engahleliwe kahle futhi ephethe imisebenzi evame ukusetshenziswa ngabantu ababeka imali ngokungemthetho. Ngakho-ke, zifakazela imigomo elula ye-FATF (Financial Action Task Force) ifuna ukuqoqwa kwemali noma eminye imisebenzi yobugebengu.
Nasi isihloko esilandelayo I-Cayman Islands Banks futhi okunye
Belize Banking. Lapha, uzobona imininingwane eminingi ngale mithetho emibili edumile.
Umlando we-akhawunti yama-Offshore Bank
Kuyinto eyiqiniso ukuthi abaseYurophu bebelokhu behlushwa kakhulu Intela imithwalo. Lokhu bekulokhu kunjalo eziqhingini zaseBrithani njengoba kwenzeka ezwekazini. AbaseYurophu babebhekene nethemba lokubuka ukuthi izimpahla zabo abazithola kanzima nomcebo uncipha. Njalo ukubanjwa kwesandla somthelisi kwaphanga ingcebo yabo. Ngakho-ke, izwekazi lase livuthiwe ukuthola isisombululo.
Kwabe sekufika ikhambi. Isizwe esincane, esiziqhingi esaziwa njengeChannel Islands safika nomqondo. Bakholisile laba badiphozi abakhungathekile ukuthi imali efakwe emabhange ayo ingakhululeka ekuhlolweni; ngakho-ke, umthwalo wentela onamandla. Lezi zinzuzo zaqinisekisa abantu abaningi baseYurophu abacebile. Ngokushesha le nsizakalo yathuthuka. Ezinye izindawo ezincane zazinaka. Nabo, baba nesasasa kuzibuthe ezikhangayo enhlokodolobha yangaphandle futhi baqala ukulungisa izikhungo zabo zasebhange. Amazwe ambalwa amukele imithetho nemigomo yasebhange enengqondo, eyisisekelo. Ngakho-ke, banciphisa ukukhathazeka okungenzeka kubatshalizimali kanye nabagcinimpahla. Ibhange lase-Offshore lase liqala ukusebenza!
Futhi kungekudala igama elithi "banking Offshore" laqala ukuvumelana nanoma yimiphi imithetho emincane engenakuphikwa. Banikezela ngokuphepha okuphephile, okuphephile, okubhange okuyimfihlo ngemithetho esebenzayo. Ngokushesha nje umhlaba wonke 'wawusazi.' Baqala ukubheka lezi zindawo njengezixazululo ezisebenzayo zezidingo zabo. AmaMelika, ama-Afrika, ama-Asiya, njll., Athola ukuthi ama-akhawunti asebhange ase-Offshore alusizo kakhulu ngezizathu eziningi. Ngokungafani namabhange abo ekhaya, la mabhange ase-Offshore ayengavunyelwa njalo ukuba nezinkinga zezombusazwe noma izingxabano zezomnotho. Iningi lamabhizinisi afundile lalibazi ngenhlonipho yalo kwezepolitiki nezezimali nezinzuzo zokuvikelwa kwempahla.
Ama-Offshore Amabhange eMidiya
Eminyakeni edlule, basebenzise okukhulu futhi ngenxa yalokho babonakala ngokwengeziwe. Ngasikhathi sinye, abezindaba baveze ngokungafanele ama-akhawunti asebhange angaphandle. Futhi, izindawo ezikhudlwana zemigwaqo emikhulu ziphendukezela ukuhlonishwa kwazo njengezizathu ezibucayi zecala elingaphansi komhlaba. Lawa mazwe anentela enkulu namabhange akhokhisa kakhulu aziveza njengezindawo eziqinisekile zezimpahla ezitholwe ngokungemthetho. Bazama ukubapenda njengezindawo ezikhethekile zezikimu zokuhlanza imali.
Abatshalizimali abasebenzisa imali nabagcina imali kade bazi ukuthi lokhu kubandlulula akunakubangelwa iqiniso. Bayazi ukuthi amabhange aphesheya kwezilwandle angaba indawo ephumelelayo yezimpahla; njengezinqaba zezimali ezidinga ukuphepha okuphephile, okuphephile, okuyimfihlo. Futhi, bayazi ukuthi la mabhange angavikela imali yawo. Okusho ukuthi, bavikela izimpahla ezingozini zezimpi zombango, ezomnotho, noma zezepolitiki emazweni abo. Namuhla, amabhange aphesheya kwezilwandle ayaqhubeka nokugcina ukuphela kwezindleko. Baqhubeka nokuhlinzeka ngendawo ephephile, eyimfihlo. Banikela ngezinsimbi ezenzelwe labo abafuna ukuvikela imali ezingozini zomthetho ongafanele kanye nentela.
Iningi labacwasi obandlululayo lizuze endaweni ephephile, eyimfihlo, neyentela ephansi. Lokho yilokho okunikezwa yi-akhawunti yasebhange lolwandle. Kubalulekile ukuhlola izinhloso zakho futhi uxoxe ngazo nomuntu osezingeni elifanele, onolwazi ngaphambi kokugxumela emanzini angahloliwe. Ziningi izinzuzo ezingenakuqhathaniswa ezinikezwe ngokusungula i-akhawunti yasebhange ye-Offshore. Idumela labo phakathi kwabafaka imali nabatshalizimali ngokunikeza indawo efanele yasebhange enezokuvikelwa ezikweletini nasekusithekeni kuyakhula. Ngaphezu kwalokho, amabhange aphesheya kwezilwandle azoqhubeka naleli gama elizuzwe kanzima lokuvikelwa kwempahla, ukuncishiswa kwentela (kuya ngomthetho wakho), kanye nokugcinwa kwemfihlo okuphezulu kakhulu.